ထိုင်းနိုင်ငံရောက် ရွှေ့ပြောင်း မြန်မာ လုပ်သားများ: ကမ္ဘာ့ ဆိုးရွားယုတ်မာ ရက်စက်ဆုံး မုဒိမ်းမှုနှင့် လူကုန်ကူးမှုဒဏ်ကို မြန်မာနှင့် မွန်မလေးများ ခံစားနေရ
Posted by ထိုင်းနိုင်ငံရောက် ရွှေ့ပြောင်း မြန်မာ လုပ်သားများ at 9:50 PM
ကျွန်တော်တို့ ဒီကိစ္စကို လူသိများအောင် ပိုလုပ်ရမယ်. ကျွန်တော်တတ်နိုင်သလောက် ကူညီသွားပါမယ် ခင်ဗျာ.
တောက် ဖတ်ရင်းနဲ့ဒေါသထွက်လိုက်တာနော် ။ အဲဒါတွေ ကျွန်မ တကယ်သိပ်မကြားဖူးဘူး ။ စော်ကားလိုက်ကြတာ ။ ကျွန်မ ဘာကူညီပေးရမလဲ ... ကျွန်မတို့အကူညီလိုရင်ပြောပါ .. ။ ကျွန်မ အများကြီးခံစားရပါတယ် .. စိတ်ထဲမှာ နင့်နေမိတယ် ။
We are myanmar..
We are not animal..
Like this case is so sad for me...
What we can do the best for Myanmmar worker in Thailand..
We need to URGENT discuss for this case..
" One for All ..All for One "
Saw Aung Thu Ra..
Have you sent this matter to UN?
all my cells of the whole body hate Myanmar government...this is because of them.USELESS...
Pavena foundation ရဲ့ ဝက်ဆိုက်လိပ်စာရနိုင်ပါမည်လား
နိုင်ငံတွင် UNHCR ( Geneva ) နှင့် အခြားကြီးမားသည့်NGOs များတွင် ဒါရိုက်တာအနေနှင့် ၆ နှစ်ခန့် လုပ်ခဲ့ဘူး
ပါသည် အထူးသဖြင့်AIDS နှင့် အမျိုးသမီးကယ်ဆယ်
ရေးကိစ္စများကို လုပ်ခဲ့ ပါသည် လက်ရှိပင်လျှင် အခြား
ဗမာ အင်ဂျီအိုများ၊ဘုရားကျောင်းများက ထိုကိစ္စများကို
ကူညီနေသည်ဟုကြားသိရပါသည် ဟုတ်ပါသလား အ
ဘယ်မျှအတိုင်းအတာအထိ ထိရောက်ပါသလဲ ထိုသတင်းမျိုးထပ်ရရင် ဆက်လက်သိပါရစေ
လေးစား ဂုဏ်ယူစွာဖြင့် 
နအဖ ကလည်း ပြည်သူတွေကို နှိပ်စက် တိုင်းရင်းသူတွေကို မုဒိန်းကျင့် မြို့ပေါ်တွေမှာတောင် စစ်တပ်ရဲ့ မုဒိန်းကျင့်မှု့တွေကို ခံနေရတာရှိနေတာပဲ။
အခုလဲ ထိုင်းနိုင်ငံမှာ သမိုင်းရဲ့ အကြွေးတွေနဲ့ လက်စားချေမှုတွေကို မြန်မာ အလုပ်သမားတွေနဲ့ မိန်းကလေးတွေ အနိုင်ကျင့်ခံ အစော်ကားခံ မဒိန်းကျင့်ခံနေရတာလား၊
အပြန်လှန်သဘောနဲ့ တချိန်ကြရင် မြန်မာတွေကလည်း ထိုင်းတွေကို ဘယ်လို လက်တုန့်ပြန် အကြွေးဆပ်ကြမယ် ဆိုတာတော့ စောင့်ကြည့်ရအုံးမှာပေါ့။ ထိုင်းတွေဟာ မြန်မာတွေ ကောင်းစားမှာကို ဘယ်တော့မှ မလိုလားဘူး မြန်မာပြည် ဒီမိုကရေစီ ရမှာကိုလည်း လိုလားသူတွေ မဟုတ်သလို တရုပ်နဲ့ အတူတူ နအဖ သက်ဆိုးရှည်အောင် လုပ်နေတဲ့ ဒေါက်တိုင်တွေထဲမှာလည်းပါတယ်။
that fucking thai fishing boats got licen from burmese gov. and fishing all marine products from myanma sea they paid undertable money to "myanma yay lote ngan" and fishing over the rules area overlimit ... tha khoe dway .... pee dot ja boe lal lote tay dal .. whatever the case maybe ... our lazy myanmar government is never alert to take right n protective action for our nation. ..they like being fucked ...so they enjoy being fucked by all nation around the world ... thats it !!!
မြန်မာတွေ ဒီလိုနိုင်ငံတကာမှာ ဒုက္ခရောက်နေကြရတဲ့ အကြောင်းကတော့ အာဏာရှုး ခွေးသတောင်းစားတွေကြောင့်ပါ..
We should translate it in english and should send it to whom may concern. SPDC is dog and thailand is cat.
I'll be glad if you put some reference about the news, like pictures,website or blogs. I just want the people to knows that this is really happening (more than just reading the text) and sympathetic about the event. So that people will be more interested in your news and more concern about our people.
We have to protect not only our race but also human being.
Its not good for the world.
We have to find why they are thinking like that. There are many many reasons.We must protect our human because we are the same human being living on earth whatever different religions and races.
ပင့်ကူအိမ်မှာ တွယ်ငြိတဲ့ ပန်းကလေးတွေ
စေးရယ်စိုး၊ ဇွန်လှိုင် ၂၈၊ ၂၀၀၈
တဲအိမ်ငယ်လေးထဲက ဧည့်ခန်း ခပ်ကျဉ်းကျဉ်းလေးမှာ ကျနော့ကို ဧည့်ခံစကား ပြောနေတဲ့သူက အသားဖြူဖြူ၊ အသက် (၂၇) နှစ် အရွယ်လောက်ရှိတဲ့ မြန်မာတိုင်းရင်းသူလေး တီး ဖြစ်ပါတယ်။ သူမရဲ့ နာမည်ကို မိုးမိုးသီတာလို့ ဆိုကြပါစို့။
မိုးမိုးသီတာဟာ သူမဘဝနဲ့ပတ်သက်ပြီး အတိတ်ကဖြစ်ပျက်သမျှ အဖြစ်ဆိုးတွေကို တိတ်တဆိတ်လေး မြိုသိပ်ထားနေရသူပါ။ တတ်နိုင်ရင် အတိတ်က ဖြစ်ပျက်ခဲ့သမျှ ခါးသီးမှုတွေအားလုံး သူမေ့ပစ်ပြီး ဘဝသစ်ဆီကို လျှောက်လှမ်းချင်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့သူ ဖျောက်ပစ်၊ မေ့ပစ်လို့မရဘူး။ အမျိုးသမီးတစ်ယောက်အနေနဲ့ ခွင့်လွှတ်လို့မရတဲ့ ဘဝနာကျင်မှု အဖြစ်အပျက်တစ်ခုဟာ သူမရဲ့ရင်မှာ အခိုင်အမာငြိတွယ်နေလို့ပါ။
"ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီး ကျမ ဘယ်သူ့ကိုမှ မပြောတော့ဘူးလို့ ဆုံးဖြတ်ထားတယ်၊ ဒီလိုပဲ မေ့ထားလိုက်ရင် ဘာပြဿနာတွေမှ ရှုပ်ရှုပ်ယှက်ယှက်ဖြစ်မလာတော့ဘူး။ နောက်ပြီး ကျမဖာသာ ကျမအိမ်ထောင်စုနဲ့ သားသမီးတွေနဲ့ အေးအေးဆေးဆေး ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နေမယ်လို့ ဆုံးဖြတ်ထားတယ်။ ဒါမေမဲ့ ရှင်သိချင်တယ် ဆိုရင်လည်း ကျမပြောပြလို့ရတယ်" လို့ မိုးမိုးသီတာက ပြောပါတယ်။
မိုးမိုးသီတာရဲ့ ဇာတိက ကရင်နီပြည်၊ လွိုင်ကော်မြို့နယ် အတွင်းမှာရှိတဲ့ ရွာလေးတစ်ရွာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ သူမဟာ ကရင်နီတိုင်းရင်းသူလေး တစ်ဦးပါ။ ပြီးခဲ့တဲ့ ၂၀၀၅ ခုနှစ်က သူမရဲ့ခင်ပွန်းသည်ကို မြန်မာစစ်သားတွေက အထမ်းသမားပေါ်တာအဖြစ် ဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားပြီးနောက် ရွာကိုပြန်မလာတော့ဘဲ ယနေ့အထိ ပျောက်ဆုံးနေပါတယ်။
အထမ်းသများအဖြစ် ဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားခြင်းခံရတဲ့ ခင်ပွန်းသည်ကို ပြန်လာနိုး ပြန်လာနိုးနဲ့ မိုးမိုးသီတာခမျာ ကာလအတန်ကြာ စောင့်မျော်နေခဲ့ပါတယ်။ တစ်နှစ်ကျော်ကြာ စောင့်ဆိုင်းခဲ့ပေမယ့်လည်း ပြန်မလာနိုင်တော့တဲ့ ခင်ပွန်းသည်ကို တရွာလုံးက သေဆုံးပြီဟု ယူဆလိုက်ကြရပါတယ်။
ဒါ့ကြောင့် မိုးမိုးသီတာဟာ ပြီးခဲ့တဲ့ ၂၀၀၆ ခုနှစ်မှာ ပိုမိုလုံခြုံစိတ်ချရမယ်လို့ မျှော်လင့်ထားတဲ့ ထိုင်းနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ မြန်မာဒုက္ခသည်စခန်း တစ်ခုဘက်ကို ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင် လာခဲ့ပါတယ်၊ ဒါပေမဲ့ မိုးမိုးသီတာတစ်ယောက် ကံဆိုးမသွားရာ မိုးလိုက်လို့ရွာဆိုသလိုပဲ ကံကြမ္မာက မျက်နှာသာမပေးပါဘူး။ သူမ ရောက်ရှိလာတဲ့ ဒုက္ခသည်စခန်းမှာ ရောက်ရောက်ခြင်း စခန်းလုံခြုံရေး တာဝန်ရှိသူတစ်ဦးရဲ့ အတင်းအဓမ္မ ကျူးလွန်မှုကို ခံလိုက်ရလို့ပါ။
ဒုက္ခသည်စခန်းမှာ မိုးမိုးသီတာရဲ့အသိမိတ်ဆွေ အချို့ရှိနေပေမဲ့ အရာရာအားလုံးဟာ သူမအတွက်အသစ်တွေပဲ မဟုတ်လား။ အစပိုင်းဖြစ်တဲ့အတွက် "ရှက်စိတ်နှင့် ကြောက်စိတ်" တို့က သူမကို လွှမ်းမိုးနေခဲ့ပါတယ်။ အရှက်က သူမ မရင်းနှီးဖူးသေးတဲ့ ဒုက္ခသည်တွေကိုပါ။ အကြောက်ကတော့ သူမရဲ့ရွာမှာ မကြာခဏ ဒုက္ခပေးတတ်တဲ့ မြန်မာစစ်သားတွေလို စစ်ဝတ်စစ်စားတွေ ဆင်ယင်ထားတဲ့ စခန်းရဲ့ လုံခြုံရေးတာဝန် ယူထားသူတွေပါ။
မိုးမိုးသီတာဟာ ပြီးခဲ့တဲ့ ၂၀၀၆ ခုနှစ် မတ်လအစောပိုင်းက ယခုလက်ရှိ သူတည်းခိုနေရတဲ့ ဒုက္ခသည်စခန်းကို ရောက်ရှိခဲ့ပါတယ်။ တစ်ညမှာ သူမ ယာယီနေထိုင်တဲ့ လူသစ်များအဆောင်ကနေ ရပ်ကွက်ထဲကို စိတ်ပြေလက်ပျောက် ဗွီဒီယိုသွားကြည့်ချိန်မှာ စခန်းလုံခြုံရေး တာဝန်ရှိသူတစ်ဦးရဲ့ ကြံစည်မှုကို ခံခဲ့ရတာပါ။
ခါးသီးတဲ့ အဖြစ်အပျက်ကို မိုးမိုးသီတာက အခုလိုဇာတ်ကြောင်းပြန်ပါတယ်။
"ကျမ ဘားရိုက်မှာနေပြီးတော့ ဟိုဘက်ကမ်းက မမို့မို့(နာမည်အရင်းမဟုတ်) တို့ အိမ်မှာ ဗီဒီယို သွားကြည့်တယ်။ အဲဒီမှာပဲ အိပ်မလို့ ဆူးလေးနွယ် (နာမည်အရင်းမဟုတ်) က ကျမကိုတွေ့တော့ ငါနဲ့လိုက်အိပ်လို့ ပြောလို့ သူနဲ့လိုက်အိပ်တယ်။ သူ့အိမ်က ရပ်ကွက် (၂၀) မှာလေ။ ကျမတို့ သူ့အိမ်ကို ပြန်တဲ့အချိန် မီးထွန်းပြန်တော့ (xxx) (စခန်းလုံခြုံရေးတပ်သားတစ်ဦး၏အမည်) က ကျမတို့ကိုတွေတော့ လိုက်ပြန်လာတယ်။ (xxx) ကလိုက်ပြန်လာပြီးတော့ ဆူးလေးနွယ်တို့အိမ်မှာ စကားပြောတယ်။ ၀ါးရန်တာမှာ လူပျိုတွေအများကြီး အိပ်နေကြတယ်။ ဆူးလေးနွယ်က သူ့အိမ်ခန်းထဲမှာ အိပ်နေပြီ။ သူများအိမ်မှာလည်း ဖြစ်တယ်။ နောက်ပြီးသူ့ကို(xxx)လည်း ကျမ မသိဘူး။ ကျမက ခပ်ကြောက်ကြောက်နဲ့ စကားထိုင်ပြောပေးရတယ်။ ကျမတို့က ဧည့်ခန်းမှာစကား ထိုင်ပြောနေကြတယ်။ ညဉ့်နက်တော့ ကျမ သူ့ကိုပြန်ခိုင်းတယ်။ “ညဉ့်နက်ပြီ၊ ပြန်တော့” လို့ သူ့ကို ပြောတယ်။ သူ မပြန်ဘူး။ သူက မီးခွက်ကို မီးမှိတ်လိုက်ပြီးတော့ ကျမကို ဆွဲလားရမ်းလားလုပ်တယ်။ ကျမလည်း အတတ်နိုင်ဆုံး ရုန်းတယ်။ ကျမရုန်းတော့ သူ ကျမလည်းပင်းကို ညစ်မလို့လုပ်တယ်။ ကျမလည်း ကြောက်တော့ မရုန်းဖြစ်တာနဲ့ သူ မညစ်တော့ဘူး။ ကျမလည်း လူသစ်ဖြစ်နေတော့ ဘယ်လိုမှ မအော်ရဲဘူး။ ပြီးတော့ အဲလိုမျိုး ဖြစ်သွားတယ်။ ၀ါးရန်တာမှာအိမ်နေတဲ့ လူပျိုတစ်စုကို အကူအညီတောင်းဖို့ ခေါ်တော့လည်း သူတို့က စခန်းတာဝန်ကျဆိုတဲ့ သူ့ရဲ့အရှိန်အ၀ါကို ကြောက်တော့ တစ်ယောက်မှ ထမလာကြဘူး။ ဆူးလေးနွယ်ကို ခေါ်တော့လည်းသူက ထမလာဘူး။ အားလုံးကသူ့ကို ကြောက်နေကြတယ်"။
ဆက်ပြီး မိုးမိုးသီတာက "အဲလိုဖြစ်ပြီးတော့ ကျမ သူ့ကို ကျမလွယ်အိတ် ပြန်တောင်းတယ်။ ကျမလွယ်အိတ်ကို သူလွယ်ထားတာလေ။ ဘယ်လောက်ပဲ တောင်းတောင်း သူပြန်မပေးဘူး။ နောက်ပြီးသူ ဆွဲချွတ်လိုက်တဲ့ ကျမဘောင်းဘီတိုကိုလည်း ပြန်မပေးဘူး။ သူ့ဘောင်းဘီ အိတ်ကပ်ထဲမှာ ထည့်ထားတယ်။ မနက်ဖြန်မှပေးမယ်လို့ သူပြောတယ်။ အဲဒါ သူကျမကို ထပ်ပြီးစော်ကားချင်တယ်ဆိုတာ ကျမသိတယ်။ သူက အတင်းထပ်လုပ်မယ်လို့လုပ်တော့ ကျမက သူဘယ်လောက်ဆွဲဆွဲ အတင်းပဲ ဆူးလေးနွယ် ရဲ့အခန်းထဲ ပြေးဝင်တယ်။ ပြေးလည်းဝင်ပြီးရော ဆူးလေးနွယ်ကလည်း ကြောက်တော့ အပြင်ကို ထွက်သွားတယ်။ အဲဒီတော့ သူ အခန်းထဲအထိ ဝင်လာပြီးတော့ ကျမနဲ့သူ တစ်ညလုံးအိပ်တယ်။ မနက်မိုးလင်းမှ သူ ကျမလွယ်အိတ်နဲ့ ဘောင်းဘီတိုကို ပြန်ပေးတယ်။ အဲလိုဖြစ်ပြီးတော့ ကျမသူငယ်ချင်းတွေက ရုံးသွားတိုင်ခိုင်းတယ်"။
မိုးမိုးသီတာခမျာ မျက်ရည်လည်ရွှဲနဲ့ သူမရဲ့စိတ်ဆန္ဒမပါဘဲ တစ်ညလုံး စခန်းလုံးခြုံရေးတပ်သား တစ်ဦးနဲ့ အိပ်ခဲ့ရတယ်။ မိုးမိုးသီတာရော သူမရဲ့အသိုင်းအဝိုင်းတွေကပါ အဖြစ်အပျက်မှန်ကို စခန်းရုံးတင်ပြီး အပြစ်ပေးအရေးယူမှုတွေ လုပ်ဖို့ ဆန္ဒရှိကြပေမဲ့ အာဏာပိုင်တွေရဲ့ ထိန်းချုပ်မှုကို မလွန်ဆန်ရဲဘဲ ကြောက်နေကြရတာမို့ မိုးမိုးသီတာအတွက် တရားမျှတမှုဟာ ယနေ့အထိ အဓိပ္ပါယ်မဲ့ နေဆဲပဲဖြစ်ပါတယ်။
"ကျမ အဲလိုဖြစ်ပြီးတဲ့နောက်မှာ တစ်ချိန်လုံး ထွက်ပြေးနေရတယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ သူ ကျမကို ဘာပဲလုပ်လုပ် ကျမဘာမှ မပြောရဲဘူးဆိုတာကို သူသိတဲ့နောက် သူဆက်ပြီး အနိုင်ကျင့်ချင်တယ်။ တနေရာထဲမှာပဲ အိပ်မယ်ဆိုရင် သူလာပြီး အနှောက်အယှက် ပေးမှာစိုးလို့ စခန်းထဲမှာရှိတဲ့ ဆွေမျိုးအိမ်တွေဆီမှာ တစ်အိမ်ပြီးတစ်အိမ် ပုန်းအောင်းပြီး နေရတယ်။ ဒါပေမဲ့ ကျမ အကြာကြီးမပြေးနိုင်ပါဘူး။ စခန်းထဲမှာပဲဆိုတော့ သူတို့နဲ့ မလွတ်ဘူးလေ။ အဲဒါနဲ့ (၆) လပိုင်းကစပြီး ကျမ စခန်းအပြင်ဘက်ထွက်ပြီး ပြေးပုန်းနေရသေးတယ်။ အခု ကျမ ယောက်ျားရှိပြီပေါ့၊ သူနဲ့တွေ့မှပဲ၊ အသက်ရှုချောင်တော့တယ်" ဟု မိုးမိုးတီတာက သူ့ရဲ့ အားကိုးရာ မဲ့ရပုံကို ပြန်ပြောပြပါတယ်။
အဲဒီဖြစ်ပျက်မှုတွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး စခန်းတာဝန်ရှိပုဂ္ဂိုလ်များ၊ အမျိုးသမီးများ၊ မြန်မာ့ဒုက္ခသည်အရေးနှင့် ပတ်သက်ပြီး အစိုးရမဟုတ်သော နိုင်ငံတကာ ကူညီစောင့်ရှောက်ရေး အဖွဲ့ဝင်များနဲ့ စကားပြောဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့လည်းပဲ ဒေသခံ အာဏာပိုင်တွေနဲ့ တိုက်ရိုက်ပတ်သက်လာတဲ့အမှုတွေကို အရေးယူဆောင်ရွက်ချက်တွေ ပြုလုပ်ဖို့ အင်မတန်မှ အခက်အခဲများနဲ့ ရင်ဆိုင်နေရဆဲပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
မြန်မာတိုင်းရင်းသားများဖြစ်ကြတဲ့ ချင်း၊ ကချင်၊ မွန်၊ ရခိုင်၊ ရှမ်း၊ ကရင်နဲ့ ကရင်နီတိုင်းရင်းသားတို့ဟာ သူတို့ရဲ့ ဌာနေဒေသတွေမှာ လွတ်လပ်စွာ နေထိုင်ခွင့်မရှိဘဲ မြန်မာစစ်တပ်တွေ၊ တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင်တွေရဲ့ မကြာခဏ အနှောက်ယှက်ပေးမှုတွေကို ခံနေကြရပါတယ်။ အထူးသဖြင့် အမျိုးသမီးတွေဟာ စစ်တပ်တွေရဲ့ အတင်းအဓမ္မ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ အနိုင်ကျင့်ခြင်းကို ရင်ဆိုင်နေကြရပါတယ်။
အမျိုးသမီးအခွင့်အရေး လုပ်ရှားမှုအဖွဲ့များနဲ့ လူ့အခွင့်အရေး လုပ်ရှားမှုအဖွဲ့တွေရဲ့ ကြိုးပမ်းမှုကြောင့် ပြီးခဲ့တဲ့၂၀၀၇ ခုနှစ်မှာ မြန်မာစစ်အစိုးရဘက်မှ မုဒိမ်းကျင့်မှု အပါအဝင် လူ့အခွင့်အရေးချိုးဖေါက်မှုများ ရပ်တန့်ရန်ဆိုတဲ့ အဆိုတင်သွင်းချက်များကို ကုလသမဂ္ဂ လုံခြုံရေးကောင်စီမှ ထည့်သွင်းစဉ်းစားပေးခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ မြန်မာစစ်အစိုးရကို အမြဲအကာအကွယ်ပေးလေ့ရှိတဲ့ လုံခြုံရေးကောင်စီအဖွဲ့ဝင် တရုတ်နဲ့ ရုရှနိုင်ငံတို့က ဗီတိုအာဏာသုံးပြီး အဲဒီအဆိုတင်သွင်းချက်တွေကို ပိတ်ပင်ခဲ့ပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံမှာ တိုင်းရင်းသားလူနည်းစု အမျိုးသမီးများအပေါ် စစ်တပ်တွေရဲ့ အကြမ်းဖက် အနိုင်ကျင့်မှုတွေကို ယခုလို လျစ်လျူရှုထားတာတွေ ရှိနေတဲ့အတွက် အမျိုးသမီးတွေဟာ ဒုက္ခသည်အဖြစ် အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံတွေဖြစ်ကြတဲ့ ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်၊ အိန္ဒိယနဲ့ ထိုင်းနိုင်ငံများဘက်သို့ စဉ်ဆက်မပြတ် ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေကြရပါတယ်။ အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံတွေမှာ ဒုက္ခသည်များအဖြစ် UNHCR ရဲ့ စောင့်ရှောက်မှုအောက်မှာ နေထိုင်ရပေမဲ့ မိုးမိုးသီတာလို အမျိုးသမီးတွေရဲ့ လုံခြုံရေးဟာ စိုးရိမ်နေရဆဲပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒုက္ခသည်အမျိုးသမီးတွေရဲ့ လုံခြုံရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီး မီးမောင်းထိုး ဥပမာပေးရမယ်ဆိုရင် ပြီးခဲ့တဲ့ ၂၀၀၆ ခုနှစ်မှ ၂၀၀၇ ခုနှစ်အတွင်း လက်ရှိ မိုးမိုးသီတာနေထိုင်တဲ့ ထိုင်းနိုင်ငံ ဒုက္ခသည် စခန်းတစ်ခုမှာဘဲ အမျိုးသမီးတွေကို လိင်အကြမ်းဖက်မှုနဲ့ ပတ်သက်ပြီး အလွန်ပင် ဆိုးရွားတဲ့ ဖြစ်ပျက်မှုတွေ ရှိခဲ့ပါတယ်။ ထိုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ ကျူးလွန်စော်ကားမှုများထဲမှ (၄) မှုလောက်ဟာ ဒေသခံအာဏာပိုင်တွေနဲ့ တိုက်ရိုက်ပတ်သက်မှု ရှိနေတယ်လို့ ဒုက္ခသည်တွေက ပြောပါတယ်။ အဲလိုတွေထဲမှာ အုပ်စုလိုက် အတင်းအဓ္ဓမအပြုခံခဲ့ရတဲ့ အဖြစ်အပျက်မျိုးတောင် ရှိတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
ထိုင်းနိုင်ငံဟာ မြန်မာဒုက္ခသည်တွေအပေါ် ဆိုးရွားစွာ ပြုမူဆက်ဆံတဲ့အတွက် ယခု ၂၀၀၈ ခုနှစ် ဇွန်လမှာ ဒုက္ခသည်နှင့် ရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်သူများဆိုင်ရာ အမေရိကန်ကော်မီတီ (USCRI) ရဲ့ ကမ္ဘာတလွှား ဒုက္ခသည်များ နေထိုင်ခိုလှုံရာ အဆိုးဆုံး (၁၀) နိုင်ငံစာရင်းမှာ ထည့်သွင်းခံရတာကို တွေ့ရပါတယ်။ အဲဒီလိုမျိုး ထည့်သွင်း ခံလိုက်ရတဲ့အတွက် ထိုင်းနိုင်ငံအနေနဲ့ မြန်မာဒုက္ခသည်တွေအပေါ် ကိုင်တွယ် ထိန်းချုပ်မှု အခြေအနေ ပိုမိုတိုးတက်ကောင်းမွန်လာနိုင်မယ်လို့ ဘယ်သူ အာမခံနိုင်မှာလဲ။
“သူတို့နိုင်ငံမှာ နေရတယ်ဆိုတော့ သူတို့ ဘယ်လိုလုပ်လုပ် ကျမတို့ ဒီလိုပဲ ခံရမယ်လို့ထင်တယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ အားလုံးက သူတို့ကို ကြောက်နေကြရတယ် မဟုတ်လား" လို့ ကျနော့ကို ဇာတ်ကြောင်းပြန်ပြောပြနေတဲ့ မိုးမိုးသီတာက မှတ်ချက်ချလိုက်ပါတယ်။
"ကျမအပေါ် အဲလိုလုပ်ထားတာ မတရားဘူးဆိုတာ အားလုံးက သိကြပေမဲ့ ဘာမှလုပ်လို့ မရပါဘူး။ ဒီကိစ္စတွေ မေ့ပစ်ချင်တယ်။ ဒါပေမဲ့ တခါတခါ တစ်ယောက်ထဲနေတဲ့အချိန် ပြန်ပြီးတွေးမိတယ်။ အရမ်းစိတ်နာပါတယ်"။ စကားဝိုင်းလေး အဆုံးသတ်ခါနီးမှာ မိုးမိုးသီတာရဲ့ ရင်ထဲက နောက်ဆုံးထွက်လာတဲ့ နာကျည်းခံစားမှု စကားလုံးတွေပါပဲ။
why did she go to this fucking place?why did she think livig in Myanmar is not savety?Haven't she parents and why didn't she talk about this?It's means that she want to go this fucking place and she also knew that,if she talk to her parents about this,they don't like and absolutly don't agree to do her this stupid work.And otherwise in internet,journals even in the daily newspaper describe about this fucking place.Everybody ,who can read in Myanmar language can know about this by about interfaces.I think that source of theis event is exactly that girl and I so wonderful about the writer of this post.Cause he may be gradurated ,but why didn't he think about this lying story and why did he believe everything the fucking slut said?I don't understand really.Pls answer me!Do u have any sence that need to think the possibility of the events or you always do and believe that everything of everybody said?If you areagragurated person,please remerber about the words that you said in convocation hall when you received your degree.So stupid!!!!you are rotten eggg!Pay attetion to writeacomment before upload to internet,please!Analize it and decide it may be reallize or not.I think you only want to know you many people by writting the strange and poor events,so you cann't check about this .....so pooooooooooooooooooooooooooooor man!And make to understand yourself and the slut said in about lying story,who thought that living in Myanmar is not savety that "Myanmar is the warmest, kindness, most valuable,most savety,most suitable in weather,most cheappest in goods,foods,clothes and everything".And the last the slut ,who want to make fcking in various types by various men!please don't say anymore the bad thing about our,your,my country"MYANMAR" like that.If you don't have any courage to speak the truth everything you did,you must stay in silient.Now everybody who hasanormal mind and IQ understood tat if one Myanmar girl want to go to foreign country is she want to make fucking thing without underwatch of parents,relatives and nations.Every valuable myanmar girl want to live in Myanmar together their family.It's so savtey indeed.I say you are "A BITCH"!!!!!!
လောကကြီးမှာနိုင်ထက်စီးနင်မှုတွေထာ၀၇ ကင်းသွားပါစေလို့ ပဲဆုတောင်၇တော့ မှာပဲပေါ့။
WHO CAN KILL SOME THAI BASTARD ....DO IT...FIGHT BACK..BUT MUST CLEVER ..
PLASE KILL SOME THAI BASTARD ...